Wax Ka Baro Halgamaagii Wayna Ee Sayidka Mohamed Cabdula Xasan
Friday June, 22 2018 - 04:25:06
Quraankii ayuu ku bartay gurigoodi,cilmigiina wuxuu ka raacday xertii fadhiyi jirtay Nugaa.Abbaarahii 1892ki ayuu
Quraankii ayuu ku bartay gurigoodi,cilmigiina wuxuu ka raacday xertii fadhiyi jirtay Nugaa.Abbaarahii 1892ki ayuu Quraankii ayuu ku bartay gurigoodi,cilmigiina wuxuu ka raacday xertii fadhiyi jirtay Nugaa.Abbaarahii 1892ki ayuu
Sayidka waxaa uu noolaa xilyadii u dhaxeysay(1856-1920), isagoona ahaa hogaamiyihii Darwiisheed,dagaalna kula jirey gumaystayaashii,waxana xarun u ahayd dhulka , Nugaaleed iyo Taleexeed oo ka tirsanaan jirtey somaliland pritishkii.
wuxuuna dhashay sanadkii 1856kii gugii loogu yeedhi jirey "Gobeysane” oo dad iyo duunyaduba barwaaqo joogeen,baligii uu ku dhashayna waxa loo yiqaanay Sacmadeeqo Buuhoodluuna ku taali jirtay
Quraankii ayuu ku bartay gurigoodi,cilmigiina wuxuu ka raacday xertii fadhiyi jirtay Nugaa.Abbaarahii 1892ki ayuu u kacay Makka Iyagoona isku raacay 13 wadaad oo ay isku xer ahaayeen.
magaalada Maka ayay isku arkeen wadaad Suudaani ahaa oo Saalixiya,xagaasi ayuu madhabkii Saalixiyadia kasoo dheehday.
1895kii ayuu dalkii dib ugu so
laabtay, markii uu soo caga dhigtay aagaga, Berbera ayay is af dhaafeen ninkii Ingiriis ahaa kaasi oo cashuur waydiiyay,, isaguna jawaab ku siiyay: "Adiga yaa cashuurtii kaa qaaaday markaad halka imanaysay?”.
Isaga iyo daraawiishtiisii labaatan sano ayey duurka ku jireen, mar la jabiyo iyo mar ay guulaystaanba intaba waxay foodda isku darayeen gumaystayaashii.
1900-1920-kii, 41 gooboodbay ku kulmayeen ciidamadii engriiska,kuwi ugu waaweeynaana waxaa kamid ahaa: Afbakeeyle, Faradhiddin, Cagaarweeyne, Daratoole, Jidbaale iyo Dulmadoobe.
Duullaankii koobaad ayaa biloowday 1899kii waxayna dhamaatay October 6, 1902 dii. Goobihii kalee ay ku kulmayeena waxa ugu weynaa Af-Bakayle iyo Fardhidin.
1903dii ayuu dhamaaday dagaalkii saddexaad oo Bari iyo Waqooyiba ku faafay.
Dagaalkii afraadna wuxuu ahaa mid ay xoog uga qeyb qaadanayeen maraakiibta dagaalka ee Ingriisku lahaa, iyagoona ula dagaalamay siddii dowlad xoog badanayd oo kaleeeto .
Beerdiga, Cagaarweyne, Daratoole, Taargooye, iyo Jidbaale.intuba waxay ahayd goobo la iskaga hor yimid.
Ingiriiskuna waxay isku dayayeen inay Sayidka ku isticmaasho siyaasad xeel dheer.
Dagaallada ugu caansanaana waxa ka mid ahaa Richard Corfield, dagaalka lagu dilay kuwaas oo dAraawiishtuna libin kasoo hoysay.
Ciidamada Ingiriisku xoogagoogii iyo xeeladaheediiba markay wax ka qaadi kari waayeen waxna ka tari waayeen Ayay ugu dambayntii u adeegsadeen dayuuradihii dagaalka xagaasi oo noqotay meeshii ugu horeysay ee dayuurad afrikaba lagu weeraray
Allaha u Naxariistee wuxuu ku geeriyooday Webigii Shabeelle degmo ku taalay Iimey.sayidku wuxuu ahaa halgamaa ka mid ah kuwii ugu caansanaa somalida alla ha u naxariisto
Wakhtigii lasoo maray
Wadka u badheedhay
Sayidkii u weynaa
Waxay u dagaalamaayeen